ညီလင်းသစ်: ၁၃ရက်၊ သောကြာနေ့
Posted by ညီလင်းသစ် au 13.3.09
ဟုတ်တယ် ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်း ၁၃ရက်သေကြာဘဲ..။ ပြောနေတာကြာပါတယ်.. ထီပြေးထိုးလိုက်ဦးမယ်..
ဆိုင်ပိတ်သဗျ ဧကန္တ ထီသည်လည်းကြောက်လို့ အိမ်မှာပုန်းနေတယ်ထင်တယ်...။
တခုခုလုပ်လိုက်ရင် - ၁၃ ရက်နေ့လိုမျိုး တိုက်ဆိုင်တတ်တယ်
မေးခွန်းဆိုလည်း နံပါတ် ၁၃ ရတတ်တယ်...
၁၃ ဂဏန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တတ်တော့ ကြာတော့ ၁၃ ဆိုတာကို သတိထားမိလာတယ်...
အဲဒီနေ့ရက်ကို သတိထားမိတာ အမှန်ပါပဲ...
စိတ်ထဲ တမျိုး ဖြစ်မြဲ :)
ဆယ်တန်းဖြေကာနီးတုန်းကလည်း physics ဆရာမက နံပါတ် ၁၃ ဖြေရင် အမှားများတတ်တယ်တဲ့။ ဆရာသမားကိုယ်တိုင်ရဲ့ စကားဆိုတော့လည်း နံပါတ်၁၃ ကိုဖြေတတ်ပေမယ့် အခြားရွေးစရာကိုရွေးခဲ့မိတယ်။ စိတ်ထဲတော့ အစွဲမထားပါဘူး။
13 ကိုမကြိုက်ပေမဲ့ သောကြာနဲ့တိုက်ရင်တော့လဲ ထူးသတိမထားဘူးဘူး။ မသိတာလဲပါတာပေါ့။တစ်ခါတလေ မသိတာကပိုကောင်းပါတ။်
13th is not referring to Judah. It's about "The last supper" and there was 13 people (including Christ)seated at the table will result in the death of one of the diners.Thanks.
Friday 13th နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးတိုလေး ဘာသာပြန် ရေးဖူးတယ်။ ဥပါဒန်ကြောင့် ဥပါဒ်ရောက်ကြတာလို့ ဆိုတယ်။ သေချာတာတော့ အဲ့ဒီနေ့က ဇွန် ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားခဲ့တယ်။